Asphalt dhaqaaqay Toroslar | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinAsphalt Moros in Toroslar oo ka socda Mersin
26 / 08 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, Asphalt News, GUUD, WADADA, TURKEY
dhaqaaqa asphalt ee buuraha Taurus
Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii wadaysaa shaqadeeda dammaanad qaadista dhammaan degmooyinka isku waqti oo ay ka mid tahay Degmada Toroslar. Bilihii xagaaga ee ay muwaadiniintu u isticmaali jireen sidii dhul banaan oo ku yaal xaafadaha miyi-doonka ah ee raba inay si xawli ah uga shaqeeyaan Dawlada Hoose ee Magaalada, ayaa shaqada la dhammeystiray waqti gaaban, wadooyinka loo furay adeeg.
2, oo isku xirta degmooyinka miyiga ah ee Degmada Toroslar iyo Degmada Yenişehir, kuwaas oo lagu burburiyey roobab mahiigaan ah intii lagu jiray bilaha jiilaalka, waddooyinka Çavak, Hamzabeyli iyo Işıktepe. Jid-goyn asfardiga lakabka ah ayaa la qabtay. Shaqada dhererka kilomitir-kiiloo mitir ee 4 iyo mitirka 7 oo balaaran oo leh xayndaabka '2 combi boiler', 1 u qaybiyeyaasha 1 dhululubo iyo 1 xamuul ayaa la dhammeeyay waqti gaaban.
Waxaan si gaar ah ugu mahad naqayaa Madaxweyne Seçer dadaalkiisa
Xaafada Hamzabeyli ee kooxda dhexdeeda xuduuda qeybta waxay qiimeynaysaa shaqadii laga qabtay Hamzabeyli Mukhtar Sencer Erdogan, xaafadu waa cillad iyo waddo burbursan, iyadoo xustay wadada Duqa Magaalada Mersin ee Magaalada Caasimadda Vahap Secer ayaa u mahadcelisay. Wadada kooxdu waa isku xirka kaliya ee udhaxeeya Degmada Toroslar iyo Degmada Yenisehir, oo tilmaamay in Muhtar Erdogan, uu sheegay inuu rumeysan yahay in adeegyada asphalt ay sii socon doonaan kala go '.
Wadada loo maro Taurus hadda waa ballaaran
Kordhinta wadada, fidinta, waraabka iyo xisaabinta waxaa lagu sameeyaa 1 backhoe loader baaldi, 1 roller, 1 digger, 1 culeys, 1 grader, 1 walxaha qodaya waxay kusii socdaan wadada isku xirta Kayrakkeşli iyo Yüksekoluk Plateau oo sidoo kale kujira xuduudaha Degmada Toroslar. Haddii shaqooyinka la dhammeeyo, marin u helidda meelaha sare ee buuraha Taurus way fududaan doontaa. Marka lagu daro shaqooyinka fidinta wadada ee xadka isku xirka kilo-mitir ee 15, 5 sidoo kale waa 2 aagga kilomitir. dabaqa dusha sare ee dusha sare ah ayaa shaqada la qabtaa.
Marka lagu daro shaqooyinka asphalting iyo dusha sare ee dusha sare ee wadooyinka isku xirka, gawaarida 6 iyo asphalt burbursan (12,5-19 mm) shaqada gaadiidka ayaa sii wadaya wadada Çavak-Hamzabeyli-Işıktepe oo ku taal xudduudda Degmada Toroslar, halka 1 dozer qodaya Alanyaalı 1 dozer , Gawaarida 1, xamuulka 1 iyo darajada 1 oo wata dayactirka wadada, shaqada dayactirka iyo ballaarinta ayaa socota.
Daraasada Barafka ee Weyn ee buuraha Taurus ee Mersin
Asphalt paving for site Industrial site
Asphalt ayaa ka socda degmada Inegol
Ma jirto isgoyska Mersin caasimadda
Shiinaha ee 24.5 bilyan doollar iyo duulimaadka garoonka
Wadada Kayrakkeşli Plateau
Asphalt Mo dhaqaaq oo Taurus ah
Wadada Yüksekoluk Plateau